Animal ဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
၂၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
တိရစ္ဆာန်တွေကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ sacred cow, dark horse, clay pigeon နဲ့ fat cat တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ၀ါရှင်တန်မှာ ရောက်နေတာ အနှစ် (၂၀) ရှိသွားပြီ။ ကျနော်တို့တွေ သူ့ကို တသက်လုံး မဲပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ သူအနေနဲ့ ယူဆထားပုံရတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ တဘက်က နိုင်ငံရေးပါတီက လူသိပ်မသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကို အမည် တင်သွင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်က မဲဆန္ဒရှင်တွေကို အပြောင်းအလဲ လိုနေပြီလို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကာ အခုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။”
နောက်တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးကတော့ clay pigeon ဖြစ်ပါတယ်။ Clay က ရွှံ့ စေး၊ pigeon ခိုငှက် ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရွှံ့ စေးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ခိုငှက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပါယ်က ငှက် မဟုတ်ပါဘူး။ Clay pigeon က ပြောင်းတိုသေနတ် လက်တည့်စမ်းရာမှာ သုံးတဲ့ပစ်မှတ်ပြား ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အဲဒီအပြားကို လေထဲပစ်တင်ပြီး မြေမကျခင် သေနတ်နဲ့ ထိမှတ်အောင် ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ clay pigeon လို့ အီဒီယံအနေနဲ့ သုံးတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်က သူတပါးတွေ ပြုသမျှနုရတဲ့ ပစ်မှတ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
“When it comes to giving money to baggers, Bill isareal clay pigeon. He can’t turn anybody down. He has his hands in his pockets reaching for money before they finish asking.”
“Bill က သူတောင်းစားတွေနဲ့တွေ့ရင် တခါတည်း ပြားပြားကိုဝပ်နေတာဘဲ။ ဘယ်သူကိုမှ သူက မငြင်းရက်ဘူးလေ။ ဟိုက လက်ဖြန့်တောင်းလို့ မဆုံးသေးဘူး သူလက်က အိတ်ထောင်ထဲ ရောက်သွားနေပြီ။”
နောက်ဆုံး တင်ပြချင်တဲ့ အီဒီယံ အသုံးကတော့ fat cat ဖြစ်ပါတယ်။ Fat က ‘၀’ သော၊ Cat ကြောင် ဆိုတော့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ၀တဲ့ ကြောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က ဘဏ်ထဲမှာ ငွေအမြောက်အများနဲ့ ကြွယ်ဝနေတဲ့ လူ ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး စကားအသုံးအနေနဲ့လည်း သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သူကို ရံပုံငွေ အလှူငွေ တနင့်တပိုးကြီး ပေးတတ်သူကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။
“This year the other party is way ahead of us when it comes to campaign money. They have all the fat cats supporting them, so they can buy twice as much TV time as we can afford”.
“ဒီနှစ်မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေ အနေနဲ့ ဆိုရင် တခြားပါတီက ကျနော်တို့ထက် သိပ်ကို အသာစီးရနေပြီ။ သူတို့ကို ထောက်ခံကြသူတွေက ထည့်ဝင်တဲ့ ရံပုံငွေတွေက အနင့်သားကို ရနေကြပြီလေ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ထက် ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မဲဆွယ်ကြော်ညာ နှစ်ဆတိုး ၀ယ်နိုင်တယ်။”